စေးကပ်ခြင်းမရှိ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးထားမှန်းမသိသာဘဲ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေစေမည့်…………. | CosmeticMyanmar
Home » Article » စေးကပ်ခြင်းမရှိ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးထားမှန်းမသိသာဘဲ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေစေမည့်………….
စေးကပ်ခြင်းမရှိ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးထားမှန်းမသိသာဘဲ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေစေမည့်………….
တချို့ Lipstick တွေကိုဆိုးတဲ့အခါ စိတ်သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်ဘဲ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးလိုက်တာနဲ့ စိတ်ကိုတခုခုကြီး ခံစားရပါတယ်။ အဓိက ကတော့ Lipstick အသားမကောင်းတာကြောင့်ပါ။ Lipstick နဲ့ နှုတ်ခမ်းသားထိတွေ့တဲ့အခါ ထူပိန်းပိန်းကြီးဖြစ်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒါမျိုးနှုတ်ခမ်းနီတွေက Moisturizer မပါတဲ့အတွက် နှုတ်ခမ်းသားခြောက်သွေ့တာတွေ နှုတ်ခမ်းအရေပြားလန်တာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အခုလို အခက်ခဲတွေ မကြုံတွေ့ရလေအောင် အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေစေမည့် Lipstick လေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဒီ Lipstick လေးကတော့ Loreal Paris ရဲ့ COLOR RICHE MOISTURE MATTE ဆိုတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ အားသာချက်ကတော့ နှုတ်ခမ်းသားလေးပေါ်ဆိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ ထိတွေ့မှုဟာ စေးကပ်မှုမရှိဘဲ ဆိုးထားမှန်တောင် မသိသာပါဘူး။ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေလို့ အားလုံးအကြိုက်တွေ့စေမှာ သေချာပါတယ်။ Velvet Matte type ဖြစ်လို့ အရမ်းကြီးမခြောက်သွေ့တာကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားကိုပါ ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူး။ Jojoba Oil ပါဝင်မှုကြောင့်လည်း ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းတွေ ဘာတွေမဖြစ်ပေါ်စေတာမို့ စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလိုမျိုး Moisture ပါဝင်ပြီး စေးကပ်မှုမရှိ ဆိုးထားမှန်းတောင် မသိစေဘဲ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတဲ့ Lipstick မျိုးကို ရွေးချယ်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Loreal Paris ရဲ့ COLOR RICHE MOISTURE MATTE ဆိုတဲ့ Lipstick လေးကို သုံးကြည့်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
သူကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ နှုတ်ခမ်းနီဆိုတဲ့အခါ အပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့ အလယ် Center point ကနေစပြီး ဆိုးပေးရပါ။ နောက်ဆုံးမှာ အောက်နှုတ်ခမ်းကို မိမိလိုသလို စိတ်ကြိုက် နှုတ်ခမ်းကိုချဲ့ဆိုးတာမျိုးတွေ ချုံ့ဆိုးတာမျိုးတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။ သူများနဲမတူဘဲ တစ်မူထူးခြားတဲ့ ခံစားချက်ကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Loreal Paris ရဲ့ COLOR RICHE MOISTURE MATTE နှုတ်ခမ်းနီလေးတွေကို ရွေးချယ်ဖို့သတိရလိုက်ပါနော်။ ဒီပစ္စည်းလေးရဲ့ စျေးနှုန်းကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခု Link လေးမှာ ဝင်လေ့လာလို့ ရပါတယ် https://cosmeticmyanmar.com/color-riche-moisture-matte/
Image Source : https://www.lorealparis.com.au